Ungayifaka kanjani i-Office Online ku-Ubuntu 16.04 | Kusuka kuLinux
Abasebenzisi abaningi fuduka usuka kwiWindows uye kwiLinux Awajwayele ukusebenzisa amaphakheji amahhovisi amahhala akhona namuhla, noma kunezindlela ezinhle kakhulu zokusebenzisa Office Lokhu kusasetshenziswa izigidi zabasebenzisi. Ezinsukwini ezedlule basibhalele basibuza ukuthi bangenza kanjani faka i-Office Online ku-Ubuntu 16.04 ngakho-ke saqala ukuthola indlela elula futhi esheshayo yokukwenza.
Isifundo esilandelayo sizosivumela ukuthi sifake i-Office Online ku-Ubuntu 16.04 nakuma-distros asuselwe, ngokuzenzakalela nangakho konke ukuncika okudingekayo, ngenxa yombhalo omuhle kakhulu oqukethe inqubo edingekayo ye-Office Online ukuze isebenze kahle.
I-Office Online - Isithombe: Omicrono
Izinyathelo zokufaka i-Office Online ku-Ubuntu 16.04
Inqubo ingahlala amahora amaningi, ngakho-ke kungakuhle ukuthi usebenzise enye indlela uma kwenzeka ukucubungula kwakho kungenamandla
Inqubo yokufaka ye-Office Online isebenzisa lo mbhalo ingahamba kancane, ngakho-ke ungethuki uma ukufakwa kuthatha isikhathi eside.
Into yokuqala okufanele siyenze ukuhlanganisa indawo yokugcina izinto isikhulu sombhalo
Ngemuva kwalokho siya enkombeni esanda kwakhiwa bese sisebenzisa i-.sh njengeSudo
Lapho iskripthi sesiqedile ukwenza, sizokwazi ukujabulela zonke izinhlelo zokusebenza zehhovisi le-Office Online, inqubo ilula futhi uma kwenzeka kuvela ezinye izixwayiso, singaziziba ngoba zingamaphakeji angahle akhishwe.
Uma kwenzeka sifuna ukuphatha insiza, umbhali walesi script usitshela ukuthi singakwenza sisebenzisa i-systemd:
Ngakho-ke ngalesi sixazululo esilula singasebenzisa i-Office Office suite online.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungayifaka kanjani i-Office Online ku-Ubuntu 16.04
hhayi lokho vula nje office.com kusuka kusiphequluli bese uqeda?
Yebo, kunabantu abathanda ukuthi i-automation yabo yehhovisi ihlanganiswe nohlelo lokusebenza futhi kubo izizwa ingokoqobo kubo kunokuyivula ngesiphequluli
Lokhu ukufaka i-libreoffice online; S
Akuyona i-microsoft office online, kodwa i-libreoffice online. Ungayikhipha kanjani?
U-Alvaro Rodriguez kusho
Ngine-xubuntu 16.04 futhi ayisebenzi kimi.
Phendula u-Alvaro Rodriguez
Ngizokutshela ukuthi ngizamile ukuyifaka kumshini obonakalayo nge-Ubuntu 16.04. Angazi ukuthi ukufakwa kungakwenza isikhathi esingakanani, kepha kungathatha ngaphezu kwengxenye yehora ... bese kuqhubeka ...
Angazi ukuthi umphumela wokugcina uzoba yini, kepha ngincoma iLagarto ukuthi yeluleke ngale mininingwane emincane kuzindatshana ezinjengalezi ... umuntu ujwayele iLinux ngezikhathi zokufaka ezizwakalayo futhi, impela, mfushane kakhulu kunalokhu, futhi, ukube wayazi , Bengizoyishiya isikhashana lapho ngibe nesikhathi esithe xaxa ... ngoba ukufakwa kuthukuthela impela!
Ngicaphuna ngokwezwi nezwi engikubhale ku-athikili ngaleso sikhathi
"Inqubo yokufaka i-Office Online isebenzisa lo mbhalo ingahamba kancane, ngakho-ke ungethuki uma ukufakwa kuthatha isikhathi eside."
Ngicabanga ukuthi awusibonanga isimangalo esiboniswa njengomyalezo wombhalo kwikhodi yomthombo yesikripthi uqobo, ongasibona endaweni yokugcina ekhishwe kule ndatshana:
"UKUFAKWA KUZOKUTHATHA ISIKHATHI ESIDE KAKHULU, 2-8 AMAHORA (Kuya ngejubane leseva yakho), NGAKHO YIBA NESINEKE NGICELA !!!"
Okusho ukuthi, ukufakwa kungathatha kusuka emahoreni amabili kuya kwayisishiyagalombili. Intukuthelo, yebo, kepha lowo oxwayisayo akayona imbuka 😉
Angikhulumi isiNgisi futhi, yize ngikwazi ukuqonda nokuhumusha umbhalo obhekisa kuwo, angivamisile ukuvakashela lezi zinhlobo zamakhasi, ngoba nami angiwufundi ikhodi yomthombo; Ngingumsebenzisi olula futhi ngikuthola njengolimi lwangaphandle. Okusho ukuthi, angikwazanga ukubheka i- "disclaimer" ngoba angifinyelelanga ikhasi eligcinwayo, kepha ngiyifundile i-athikili, okuvela kumbhalo wayo ukuthi bekungeke kwenzeke ukuthi isikhathi sokufakwa sithathe amahora ambalwa.
Kufakwe isexwayiso, ukuze abasebenzisi bakusasa bangabi nankinga maqondana nesikhathi sokufaka
Ngempela, uLizard, wayengazami ukudala impikiswano. Ngifunde umbono wokuthi ukufakwa kungahle kuhamba kancane, kepha kube amahora amaningi futhi bekungakaqedi ... isigamu sehora kubukeka njengesikhathi esiningi sokufanelekela ukufakwa njengokuhamba kancane, kepha ngalesi sikhathi sengivele ngivele ngacabanga! Kuthatha ngaphezu kwamahora amabili futhi akukapheli okwamanje!
Ngiyaphinda ngithi, bengingazami ukudala impikiswano, futhi-ke kuyathokoziswa ukuthi wabelana ngolwazi lwakho ngokuzidela, kepha into eyodwa ukufakwa okuhamba kancane, kanti okunye ukufakwa ... okudlula amahora amabili !!! Kuwubulwane! Futhi azisekho izimpawu zokuthi izophela!
Ngiyaziphendulela ukuze ngikutshele ukuthi, ekugcineni, bekufanele ngiyeke ukufaka i-Office Online, ngoba ukufakwa kuthathe isikhathi eside ngaze ngaya kokwenza umsebenzi ngishiya umshini uvuliwe. Lapho ngihamba, kwase kungaphezu kwamahora amathathu. Lapho ngibuya, ngemuva kwamahora angaba mane (futhi bekuzoba yisikhombisa, okungenani) ngithole inkhulumomphendvulwano edinga ukwamukelwa, sengivele ngamukela, kepha ibuyise iphutha engingalikhumbuli futhi ukufakwa akuqedanga. Ngibhekene nesimo esinje, akukaze kudlule engqondweni yami ukuyizama futhi.
Isihlamba sami, okungeyona into ebucayi, futhi angizimisele ukuhlupha muntu, sigxile nje ekulungiseni inkomba mayelana nesikhathi sokufaka esenziwe ku-athikili, lapho kuthiwa inqubo yokufaka «ingaba kancane kancane ”, futhi ngicabanga ukuthi kungaba ngcono kakhulu ukukhombisa ukuthi ingahlala amahora amaningana.
Ngokwami, ukube benginombono omubi wesikhathi sokufaka, bengingeke ngisho ngiyizame futhi ibizongongela isikhathi nemali kwisikweletu sikagesi. Lokho wukuthi, kucatshangelwa ukuthi sikhuluma ngamahora amaningi wokufakwa, ngicabanga ukuthi kufanelekile ukusikisela ukuthi i-athikili ikuxwayisa ngokusobala.
Ngokusobala, yebo, ngumbhali okufanele akuhlole, inkomba eqonde ngokwengeziwe ibizongongela isikhathi esiningi.
Ingabe iMicrosoft Office uyifaka? Isebenza kanjani ilayisense?
Kuyahlekisa ukubona ukuthi baya kuLinux ngoba bazonda yonke into enuka njengeMicrosoft, futhi into yokuqala abayifunayo ngaphakathi kweLinux yilezi zinto eziwubuwula nokuthi ungayifaka kanjani iWine, i-playonlinux, imishini ebonakalayo enezithombe zeWindows, okungukuthi, bafuna i-distro yabo isebenze yonke i-MS.
Akuthina sonke esenza ushintsho sinje. Mina, ngenxa yomsebenzi, angikwazi ukuyeka ukusebenzisa ihhovisi leMicrosoft. Futhi, ngidinga ukusebenzisa ezinye izinhlelo ezingenazo ezinye izinhlobo zamahhala noma, uma zikhona, azilungile njengozakwabo wezohwebo. Ngaphezu kwalokho, kunenkinga yokwenza amafayili ahambisanayo ukuze ahlelwe kumakhompyutha ahlukahlukene ahlukahlukene. Kuwukufela ukholo, kepha kwenziwa umzamo. Esikhundleni sokuthuka, funda futhi uqonde.
"Officeonline-install.sh: 293: officeonline-install.sh: Iphutha le-syntax: ukuqondisa kabusha okungalindelekile"
uzosebenzisa # sudo ./officeonline-install.sh
Uyikhipha kanjani le nto? futhi ngiyisusa kanjani i-lool yomsebenzisi
Ngijoyina umbuzo wakho… ukhishwa kanjani?